Global Voices teny Malagasy » ‘September’: Sehatra Vaovao Hivoahan’ny Hevitra Elatra Havia Ara-Politika Manerana Ny Firaisana Sovietika Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy » Print
‘September': Sehatra Vaovao Hivoahan'ny Hevitra Elatra Havia Ara-Politika Manerana Ny Firaisana Sovietika Teo Aloha
Voadika ny 07 Oktobra 2016 7:58 GMT 1	 · Mpanoratra Isaac Webb Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azerbaijan, Belarosia, Kazakhstan, Okraina, Rosia, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Sary avy amin'ny: tetedelacourse, Flickr. CC 2.0
Tamin'ny Zoma heriny lasa teo, namoaka ny “September ” ny vondrona mpikatroka sy manam-pahaizana avy ao Okraina, Rosia, Belarosia, Kazakhstan, ary Azerbaijan, tranonkala iray izay antenain'izy ireo ho sehatra famoahan-kevitra eo amin'ny samy antoko elatra havia manerana ny Firaisana Sovietika teo aloha. Mikendry ny hanolotra ny fomba fijery avy amin'ny elatra havia sy avy amin'ny firenena isan-karazany momba ny Firaisana Sovietika teo aloha ny tetikasa, izay nitombo avy amin'ny ” Commons  ” ao Okraina, ” Pravsvet  ” ao Belarosia, ary ireo fandraisana an-tanana avy amin'ny antoko ankavia hafa ao amin'ny faritra hanasongadinana ireo fanadihadiana avy amin'ny mpanoratra manerana ny faritra.
Nilaza i Aliona Lyasheva, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny September sady mpianatra doktorà ao amin'ny Oniveristen'i Milan-Bicocca, fa ny tsy fisian'ny feo matanjaka avy amin'ny elatra havia ao Okraina sy any amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha rehetra any no antony iray nahatonga ny tetikasa. Anjakan'ny politika mahazatra sy ny elatra havanana hoy izy ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny daholobe, ary manosika ny hevitry ny elatra ankavia ho any amin'ny sisiny. “Ao Okraina, ohatra, misy ny fomba fijery liberaly malaza sy ny fomba fijerin'ny elatra havanana momba ny ady any atsinanana, kanefa tsy misy ny avy amin'ny elatra ankavia. Inona moa no antony tsy hanaovana izany?”
Mivaky toy izao ny pejy About Us  (Momba Anay) ao amin'ny September:
Hitantsika any amin'ny fiarahamonina post-Sovietika maro ny fahaterahan'ny hetsika farany havanana izay mamindra aretina fankahalam-bahiny aty amin'ny firenentsika, sy ny fanitsiana avoakan'ny neoliberalisma izay mampitombo ny fahantrana sy ny fifandiram-paritany mitarika ho any amin'ny fandatsahan-dra. Zara raha iarahana miresaka ireo trangan-javatra ireo ary jerena fomba fijery eo amin'ny faritra samihafa. Mahalana ihany koa no atao lohahevitra fanadihadiana ao anatin'ny tontolon'ny Firaisana Sovietika teo aloha ny fironana eran'izao tontolo izao toy ny fiantraikan ‘ny teknolojia vaovao eo amin'ny fiaraha-monina. Mikendry ny hameno ilay tontolo ny September amin'ny alalan'ny fanorenana fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra manavatsava sisintanim-panjakana ary eny fa na dia any amin'ny faritra misy disadisa mitam-piadiana aza.
Manasongadina ny teny faneva maneso “Tsy mbola Oktobra izao, saingy efa akaiky” ny September izay miteny ankolaka ny revolisiona ho avy efa antomotra. Na izany aza, tsy maneho fangorahana amin'ireoy fitondrana tsy-refesi-mandidy izay tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny Oktobra 1917 i Lyasheva sy ny mpiara-miasa aminy. Anisan'ny olana ho an'ny elatra havia ankehitriny, hoy izy, ny fampifandraisana an'izy ireo avy hatrany amin'ny URSS (Firaisana Sovietika): “Rehefa miresaka momba ny elatra havia eto ianao, dia manana fifandraisana amin'ny Komonista fahiny sy ny Firaisana Sovietika, hoy ny olona. Tsy izany anefa izahay… Tsy te-hahita kintana mena ao amin'ny tranonkalanay izahay.”
Mahaleotena tanteraka ny famatsiana ara-bola ny September izay hiresaka lohahevitra miainga amin'ny politika ankehitriny sy ny teoria ara-politika, ny siansa ary ny fanabeazana. Misy olona 18 amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny famoahan-dahatsoratra ary antenain'i Lyasheva fa hitombo ny tambajotran'ny mpandray anjara manerana ny faritra.
Aliona Lyasheva. Sary avy amin'ny: Facebook
Amin'izao fotoana izao aloha, mbola ao Rosia ihany no namoahana ny September, na dia mikasa ny handika ny andinin-teny avy amin'ny famoahana lahatsoratra miandany amin'ny elatra havia aza ny toniandahatsoratra toy ny Jacobin  sy ny Open Democracy . Ahitana ny “Neoliberalisma miaraka amin'ny toera mampiavaka ny Rosiana ,” nosoratan'i Ilya Matveev sy ny “Ny Zavon'ny ‘Ady Hybrida': Nahoana no mampidi-doza ny mieritreritra Hybrida ,” nosoratan'i Vladimir Artyukh ny lahatsoratra hita ao amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao .
Ankoatra ny fanomezana fitenenana ho an'ny fomba fijery elatra havia , mihevitra i Lyasheva fa manana fahafahana hanova ny fomba fijerin'ny olona Tandrefana sy ao amin'ny faritra momba ireo firenena ao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha ny September :
Takatsika fa maro ireo vondrona sy fifandraisana eo amin'ireo anisan'ny firenen'ny Firaisana Sovietika teo aloha, eo amin'ny lafiny fifampiankinana ara-toekarena sy fitovitoviana ara-kolontsaina. Ohatra, na dia roa taona taorian'ny ady aza, dia i Rosia no mpiara-miombon'antoka ara-barotra lehibe indrindra amin'i Okraina (raha toa ka tsy isaina ho toy ny firenena iray ny Vondrona Eoropeana ), ary tsy hay tohaina ao amin'ny faritra ny fanatrehana ara-politika sy ara-tafik'i Rosia. Miteraka ny fifampiankinana ara-drafitra tanteraka ao amin'ny faritra izany, na dia tsy fantatry [ny firenena Tandrefana] aza, ampidirina amin'ny sokajin'ny ‘sosialisma teo aloha’ , ‘tetezamita ara-toekarena’, sns aza. Raha toa isika te-hahafantatra ny fomba atao eo anatrehan'ireo toe-javatra ireo, dia mila mizara hevitra mazava momba ny zava-mitranga ankehitriny. Fa miaraka amin'izay ihany koa, tsy manonofy karazana fanakambanana ‘pan-Eoraziatika’ eo ambonin'izany fototry ny Firaisana Sovietika teo aloha izany izahay, ary tsy mila manembona Sovietika.
Manaiky i Vladimir Artyukh, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny September sady mpianatra doktorà ao amin'ny Oniversiten'i Eoropa Afovoany ao Budapest, izay nilaza fa tiany ny tetikasa hifanamby amin'ny rafitra sasany izay napetraky ny tandrefana ao amin'ny tontolon'ny Firaisana Sovietika teo aloha. Na izany aza, hoy izy, ny September dia tetikasa hifantoka amin'ireo teboka itovizan'ny ao amin'ny faritra.
Efa Oktobra isika izao, ary efa ho tonga ny revolisiona. Avy eo indray, vao hanomboka ny September.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/07/89718/
 Neoliberalisma miaraka amin'ny toera mampiavaka ny Rosiana: http://september.media/archives/7
 Ny Zavon'ny ‘Ady Hybrida': Nahoana no mampidi-doza ny mieritreritra Hybrida: http://september.media/archives/294